नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण नौ प्रतिशतभन्दा बढी - नेपालबहस
आइतबार , बैसाख ५, २०७८
गृहपृष्ठ › अर्थ/व्यापार › पूर्वाधार/विकास
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण नौ प्रतिशतभन्दा बढी
| १४:४३:१३ मा प्रकाशित
२७ फागुन,काठमाडौँ । नागढुङ्गा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेको छ । अहिलेसम्म सुरुङको नौ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ प्रभावका कारण निर्माण सुस्त भए पनि चालु आवमा निर्माणले गति लिइरहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
गत वर्षसम्म तोकिएको तालिकाभन्दा धेरै ढिलाइ भए पनि अहिले झण्डै एक महिना मात्रै ढिला भएको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । अहिले सुरुङमा चौबीसै घण्टा काम भइरहेको छ । उनले भने, “शनिबारबाहेक अरु दिनमा रातदिन काम भइरहेको छ ।” सुरुङ खन्ने कामसँगै अहिले आवश्यक पर्ने सहायक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढिरहेको छ । पूर्वतर्फबाट मुख्य सुरुङको ४९ किलोमिटर र पश्चिमतर्फबाट १४९ किमी खनिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आपतकालीन प्रयोगका लागि बनाइएको सुरुङ ४५ किमी खनिएको छ । शुरुमा कठिन भूगोलमा सुरुङ खन्ने काम भइसकेकाले अब खन्न सजिलो हुने प्रमुख शाक्यले बताए । उनले भने, “अबको दिनमा सुरुङको गति बढ्नेछ ।”
सोही आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको अगाडिपट्टि नागढुङ्गामा ‘ओभरपास’ निर्माण भइरहेको छ । सुरुङसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माण अघि बढेको छ । आयोजनाका कारण खानेपानीको समस्या आउन सक्ने भएकाले विकल्पका रुपमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढिरहेको छ । पहुँच सडक र ‘ओभरपास’ डेढ महिनामा निर्माण सकिने बताइएको छ ।
आयोजनाले सिस्नेरी खोलालाई अर्कातर्फ फर्काएर सम्याउन लागेको छ । सो स्थानमा स्थानीयवासीको उत्पादन सङ्कलन गर्ने केन्द्रलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि खोला पुरिइरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । ठूलो मैदान बनाउने काम एक चरणको पूरा भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले सुरुङ खन्नका लागि १६ महिना लाग्ने गरी तालिका बनाएको थियो । त्यसमध्ये अहिले एक महिना सकिएको प्रमुख शाक्यले बताए । अबका समयमा १५ महिनामा खनिसकिने गरी काम अघि बढेको छ । खन्ने कामपछि सुरुङमा अन्तिम काम हुनेछ । त्यस क्रममा बत्ती जडान, आगो लाग्दा निभाउनका लागि बत्तीको व्यवस्थापन, सिसिटिभी राख्नेलगायत काम हुनेछ ।
निर्माणस्थलमा अहिले नेपाली र जापानी जनशक्ति कार्यरत छ । नेपाली इञ्जिनीयर झण्डै ९० र परामर्शदाता कम्पनीका तीन जना छन् । निर्माण कम्पनीका २४ प्राविधिक जनशक्ति त्यहाँ कार्यरत छन् । अदक्ष जनशक्तिमा भने सबै नेपाली नै छन् । अहिले झण्डै ३५० कामदार कार्यरत छन् । सडक विभागका १४ प्राविधिक जनशक्ति निर्माणस्थलमा रहेको प्रमुख शाक्यले बताए । उनले भने, “नेपालको पहिलो सुरुङ भएकाले नेपाली प्राविधिकलाई पनि सिक्नका लागि अवसर भएको छ ।”
गत वर्ष असोजमा कम्पनीले सडक विभागसँग ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’मा सुरुङ निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबीसे सडकखण्डमा दैनिकरूपमा हुने सवारी चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस स्थानमा धेरै सवारी साधन र व्यक्ति अलपत्र पर्ने गरेकामा समाधान हुनेछ । सोको समाधानसँगै पेट्रोलियम पदार्थको बचत पनि हुनेछ ।
आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर गरेर दुई सुरुङ निर्माण हुनेछ । दुई ‘फ्लाइओभर’, एक सर्भिस सेन्टर र तीन दशमलव एक किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुख र सतुङ्गलमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन लागिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डानुसार एउटा लेनको चौडाइ साढे तीन मिटर हुन्छ । तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन सवारी साधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिग्रँदा दुइटै गाडी चल्न सक्नेछन् । सहायक सुरुङ तत्काल उद्धारका लागि हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशद्वार बन्नेछ ।
सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटो त्यहीँ निर्माणका क्रममा प्रयोग हुनेछ । कमजोर ढुङ्गामाटालाई भने सिस्नेखोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिनेछ । सो स्थानमा बसपार्क र तरकारी सङ्कलन केन्द्रलगायत कक्ष हुनेछ । निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनीबेँसी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । हाज्माआङ्दो कर्पोरेशन र विभागबीच गत वर्ष असोजमा सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष कात्तिक ५ गते त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यसको केही समयपछि नै निर्माण शुरु भएको थियो ।
खुशीको खबर ! अब छोराछोरी जन्माए तीन हजार पाइने २ घण्टा पहिले
बर्दियामा ‘बङ्गुर मिसन कार्यक्रम’,स्थानीयमा खुशी २ घण्टा पहिले
ओलीले वैशाख ९ गते पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्ने २ घण्टा पहिले
स्पेन भ्रमण राष्ट्रहितका लागि फलदायी :अध्यक्ष तिमिल्सिना २ घण्टा पहिले
ओलीलाई बैठक रोक्न बोहोराको ध्यानाकर्षण पत्र ! २ घण्टा पहिले
अर्थ समितिद्वारा आगामी बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल २ घण्टा पहिले
त्रिभुवन आदर्श माविमा प्रजातान्त्रिक योद्धाको सम्झनामा अक्षयकोष स्थापना २ घण्टा पहिले
विप्लव ओलीप्रति असन्तुष्ट २ घण्टा पहिले
नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने श्रेष्ठ को हुन् ? २ घण्टा पहिले
तीव्र गतिमा फैलिदै कोरोना, आज १०९६ संक्रमित ३ घण्टा पहिले
निकट भविष्यमै नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन्छ : पौडेल ३ घण्टा पहिले
कैलालीमा १० दिन विद्यालय बन्द गर्न गरिने ३ घण्टा पहिले
भारतमै कोरोना पुष्टि भएका युवकको दैलेखमा मृत्यु ३ घण्टा पहिले
फन्डको अध्यक्षमा महतो र सीईओमा भट्टराई नियुक्त ३ घण्टा पहिले
बाख्राफार्ममा आगलागी हुँदा ६० लाखको क्षति ८ घण्टा पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ वैशाख ०५ गते आइतबारदेखी ११ गते शनिबारसम्मको ] १४ घण्टा पहिले
सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक आहारका लागि नगद ९ घण्टा पहिले
अयोध्याधामको आधिकारिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल ७ घण्टा पहिले
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य ! २२ घण्टा पहिले
महासंघको ‘एक पत्रकार एक ल्यापटप’ अभियान ६ घण्टा पहिले
नभाल्नीको केही दिनभित्र ज्यान जान सक्ने चिकित्सकको चेतावनी ४ घण्टा पहिले
विश्वरभरका गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न ओलीको आग्रह ४ दिन पहिले
दुई बैंकसहित यी कम्पनीको शेयरमा झुम्मिए खरिदकर्ता, कुनको शेयरमा कति माग ? ६ दिन पहिले
आरक्षबाट आएको हात्तीको आक्रमणबाट किसानको मृत्यु २ दिन पहिले
‘उत्तम शान्ति पुरस्कार’ नियात्राकार अर्याललाई ६ दिन पहिले
नयाँ वर्षले थप उत्साह प्रदान गर्ने छ : मुख्यमन्त्री पौडेल ४ दिन पहिले
भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना,चालकको मृत्यु ५ घण्टा पहिले
स्थितिलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षितरुपमा नयाँ वर्ष मनाउन देउवाको आग्रह ४ दिन पहिले
गुलाफको फुलबारीमा फूल काट्दै ४ दिन पहिले
मलाई सोध्न बन्द गर्नुस, हो म प्रेगनेन्ट भएकी हुँ : प्रियंका कार्की २ हप्ता पहिले
ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिविहीनको निवेदन प्राप्त २ हप्ता पहिले
नक्कली केटी लिएर आइन् सुन्दरी निता ३ हप्ता पहिले
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्यो, अस्ट्राजेनिका खोपमा स्वास्थ्य समस्या छैन ४ हप्ता पहिले
केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचमा लगाइएको कोटा प्रणाली स्थगन ३ दिन पहिले
ओलीको विदाइ आजको दिनमा मुख्य प्राथमिकता : भट्टराई २ हप्ता पहिले
शैक्षिक सुधारमा योगदान पुर्याउने अभिभावकलाई सम्मान ५ दिन पहिले
बुटवलमा अर्घाखाँचीकी संक्रमित महिलाको मृत्यु २ दिन पहिले
किन गए पूजाको घर वरिपरि पल घरीघरी ? १ वर्ष पहिले
पञ्चदेवल जीर्णोद्वारको पर्खाइमा १ महिना पहिले
किरियापुत्रीसहित सीमानाका झुलाघाटबाट ३७८ को उद्धार ११ महिना पहिले
जुम्लामा पाँच हजारलाई रोजगारी ८ महिना पहिले